သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ အလင်းရောင်ကို နာမည်ပြောင်လေးခေါ်ပြီး မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ဖွေးဖွေး – Askstyle
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ အလင်းရောင်ကို နာမည်ပြောင်လေးခေါ်ပြီး မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ဖွေးဖွေး
နိုင်ငံကျော် မင်းသမီးချောလေး ဖွေးဖွေးက ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပီပီပြင်ပြင်နဲ့ အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်နိုင်သူတစ်ဦးပါပဲ။ သူမရဲ့ ထူးခြားတဲ့ သရုပ်ဆောင်စွမ်းရည်ကြောင့် အနုပညာသက်တမ်း ၁၀ နှစ်အတွင်းမှာ အကယ်ဒမီဆုကြီး သုံးဆုတိတိကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်ဆွတ်ခူးရရှိထားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ဖွေးဖွေးကအခုလက်ရှိမှာလဲအနုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်တိုက်ဆိုသလို လုပ်ကိုင်နေလျက်ရှိပါတယ်။
ဒီနေ့ကတော့ ဖွေးဖွေးရဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ အလင်းရောင်ရဲ့ မွေးနေ့လေးဖြစ်ပြီး ဖွေးဖွေးကလဲ သူမရဲ့ သူငယ်ချင်းလဲဖြစ် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လဲဖြစ်တဲ့ အလင်းရောင်အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေးကို ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကနေတဆင့် ဆုတောင်းပေးထားပါတယ်။
ဖွေးဖွေးက “ဟက်ပီးဘတ်ဒေး ရောင်ရောင် !! We’ve been throughalot together! Cheers to this birthday and to many many more!!! Stay Awesome As Always Brother 22nd April, 2019” ဆိုပြီး အလင်းရောင်အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးထားပါတယ်။
အလင်းရောင်နဲ့ ဖွေးဖွေးက ဒါရိုက်တာဝိုင်းရဲ့ တပည့်တွေဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကိုလဲ အတူတူ ရိုက်ကူးရင်း ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဆိုလဲ မမှားပါဘူး။ ဒီနေ့ အလင်းရောင်ရဲ့ မွေးနေ့မှာတော့ ဖွေးဖွေးက အလင်းရောင်ရဲ့ နာမည်ပြောင်လေးကို ခေါ်ပြီး မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးထားတာ အရမ်းချစ်စရာကောင်းတာပဲနော်။
ဖွေးဖွေးနဲ့ အလင်းရောင်တို့က လက်ရှိမှာလဲ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို အတူတူ တွဲဖက်လုပ်ကိုင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဖွေးဖွေးနဲ့ အလင်းရောင်တို့ရဲ့ “ကံ့ကော်နီ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကလဲ ရုံတင်ပြသတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယယ်။ အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
နိုငျငံကြျော မငျးသမီးခြောလေး ဖှေးဖှေးက ကရြာဇာတျရုပျကို ပီပီပွငျပွငျနဲ့ အကောငျးဆုံးသရုပျဆောငျနိုငျသူတဈဦးပါပဲ။ သူမရဲ့ထူးခွားတဲ့သရုပျဆောငျစှမျးရညျကွောငျ့အနုပညာသကျတမျး၁၀နှဈအတှငျးမှာအကယျဒမီဆုကွီးသုံးဆုတိတိကိုထိုကျထိုကျတနျတနျဆှတျခူးရရှိထားသူတဈဦးဖွဈပါတယျ။ဖှေးဖှေးကအခုလကျရှိမှာလဲအနုပညာလုပျငနျးတှကေို ဆကျတိုကျဆိုသလို လုပျကိုငျနလေကျြရှိပါတယျ။
ဒီနကေ့တော့ ဖှေးဖှေးရဲ့ သူငယျခငျြးဖွဈသူ အလငျးရောငျရဲ့ မှေးနလေ့ေးဖွဈပွီး ဖှေးဖှေးကလဲ သူမရဲ့ သူငယျခငျြးလဲဖွဈ လုပျဖျောကိုငျဖကျလဲဖွဈတဲ့ အလငျးရောငျအတှကျမှေးနဆေု့တောငျးစကားလေးကိုဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာကနတေဆငျ့ ဆုတောငျးပေးထားပါတယျ။
ဖှေးဖှေးက “ဟကျပီးဘတျဒေး ရောငျရောငျ !! We’ve been throughalot together! Cheers to this birthday and to many many more!!! Stay Awesome As Always Brother 22nd April, 2019” ဆိုပွီး အလငျးရောငျအတှကျ မှေးနဆေု့တောငျးပေးထားပါတယျ။
အလငျးရောငျနဲ့ ဖှေးဖှေးက ဒါရိုကျတာဝိုငျးရဲ့တပညျ့တှဖွေဈပွီးရုပျရှငျဇာတျကားပေါငျးမြားစှာကိုလဲအတူတူရိုကျကူးရငျး ခငျမငျရငျးနှီးတဲ့ သူငယျခငျြးတှဆေိုလဲ မမှားပါဘူး။ ဒီနအေ့လငျးရောငျရဲ့မှေးနမှေ့ာတော့ဖှေးဖှေးကအလငျးရောငျရဲ့ နာမညျပွောငျလေးကို ချေါပွီး မှေးနဆေု့တောငျးပေးထားတာ အရမျးခဈြစရာကောငျးတာပဲနျော။
ဖှေးဖှေးနဲ့ အလငျးရောငျတို့က လကျရှိမှာလဲ အနုပညာလုပျငနျးတှကေိုအတူတူတှဲဖကျလုပျကိုငျနတောပဲဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးအတှကျ ဖှေးဖှေးနဲ့ အလငျးရောငျတို့ရဲ့ “ကံ့ကျောနီ” ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးကလဲ ရုံတငျပွသတော့မှာပဲ ဖွဈပါတယယျ။ အခြိနျပေးပွီး ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိသတျကွီးကို ကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါတယျ။
Share From Global Myanmar Media